Exhibitors @ Exhibition! | The World of Pinkgold
Exhibitors @ Exhibition!
Posted on March 25, 2008 by cuttiepinkgold
Myanmar ICT Exhibition 2008 ကို မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့ထိ (၃)ရက်တိုင်တိုင် တပ်မတော် ခန်းမမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပိုစ့်မှာလည်း ပြပွဲကျင်းပရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အကြောင်းကို ကျွန်မ ရေးသားခဲ့ပြီးပါပြီ။ အဲဒါကိုတော့ ICT Guide Book မှာပါတဲ့ Message From the Organizers ဆိုတာလေးကို ကျွန်မ ကော်ပီကူးထားတာပါ။ (ဒီဒီကို မေးလို့ ဖြေတာ)။ ဒီပြပွဲမှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီတွေ၊ Branded Computer and other accessories တွေကို တင်သွင်းရောင်းချ နေတဲ့ Company ကြီးတွေ၊ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတွေ၊ Software, Website များရေးသား ပေးနေကြသော ကုမ္ပဏီးတွေ နဲ့ အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများ တင်သွင်းရောင်းချကြတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ပြခန်းတွေကို ခင်းကျင်းပြသ ကြတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ ကွန်ပျူတာ ကုမ္ပဏီတွေ အနေနဲ့ကတော့ laptop, LCD Moniter, Ipod နှင့် တစ်ခြားသော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းသက်သက်သာသာ နဲ့ရောင်းချခဲ့ကြတာ တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ 1 GB Flash Drive တစ်ခုကိုတောင် ဈေးနှုန်း ကျပ် ၇၅၀၀ လောက်ထိ လျှော့ရောင်းကြတော့ ၀ယ်တဲ့သူတွေလည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး ၀ယ်ကြတော့တာပေါ့။ ကျွန်မ အနေနဲ့ကတော့ သူတို့တွေ ဘာပစ္စည်းတွေ ရောင်းတယ်ဆိုတာထက် ပြခန်းကို ဘယ်လိုခင်းကျင်းပြသတယ်ဆိုတဲ့ အပြင်အဆင်ကိုပဲ ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ရှင့်။ Advertising ပိုင်းကို တာဝန်ယူရတဲ့ သူလို့ မပြောရဘူးနော်။ အဲဒီတော့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြတယ် ဆိုတာကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သူတို့ အိုင်ဒီယာကို ကူးချ (အဲလေ.. ဟုတ်ပါဘူး) သူတို့ အိုင်ဒီယာကို base ယူပြီး စိတ်ကူးအသစ်တွေ ကွန့်မြူးနိုင်အောင် မအားတဲ့ကြားက၊ ကိုယ့်ပြခန်းမှာ အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတဲ့ကြားက သွားဖြစ်အောင် သွားပြီး ရိုက်ယူခဲ့ သေးတယ်ရှင့်။
ဒါကတော့ http://www.planet.com.mm, http://www.mysuboo.com, Internet Journal, 7-Days Nwes Journal, 7-Days Sport Journal, Myanmar People Magazine တို့ကို ထုတ်လုပ်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ Inforithm-Maze ရဲ့ ပြခန်းဖြစ်ပါတယ်။ Website, Software, E-Gov စသော ၀န်ဆောင်မှု ပေါင်း မြောက်များစွာကိုလည်း Inforithm-Maze က တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
ဒါကတော့ View Sonic ရဲ့ ပြခန်းပါ။ Laptop, LCD Moniter, Handset စတာတွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာ ရောင်းချပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်
ဒါကတော့ EPSON ရဲ့ ပြခန်းပါ.. မိုက်တယ်နော်.. လန်ထွက်နေတာပဲ
ကဲ မြန်မာ့ နံပတ် (၁) Notebook ဖြစ်တဲ့ TOSHIBA Brand ကတော့ ပိုက်ဆံတွေ အကုန်အကျ တော်တော်ခံပြီး ဒီလိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်
သူ့ဘေးက SONY ကလည်း ဘယ်အညံ့ခံပါ့မလဲ… အားကျမခံ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ့
ဒါကတော့ ASUS ရဲ့ ပြခန်းပါ။ သူက မြန်မာပြည်မှာ စတင်ဈေးကွက်ထိုးဖောက်နေတဲ့ Brand မို့လို့ ငွေကုန်ကြေးကျ တော်တော်ခံပါတယ်။ ပြခန်းပြင်ဆင်တာတောင် သိန်း ၁၀၀ လောက်ရှိတယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အဲဒီက ပိုင်ရှင် မမကြီးကလည်း တော်တော် သဘောကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ပြခန်းအတွက်တောင် Flat Moniter, LCD Moniter တွေ ငှားပေးသေးတယ်ရှင့်.. အဲဒီမှာ ကျောင်းသားတွေ အတွက် ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Notebook များကို ကျပ် သုံးသိန်းလောက်နဲ့ ရောင်းချ ပြသပေးခဲ့ပါတယ်။ Windows Vista Home Premium ကိုလည်း ထည့်ထားပါတယ်တဲ့။
ဒါကတော့ BENQ ပါ.. ကျွန်မဆိုရင် သူ့ရဲ့ mouse တွေကို သိပ်ကြိုက်တာ
MSI ကတော့ Model Show တစ်ခုနဲ့ စည်စည်ကားကား ပြသခဲ့ပါတယ်.. သူကလည်းပြောမနေနဲ့.. LCD တွေ ပေါများတိုင်းကို ချိတ်ထားတော့တာပဲ ပြခန်းရဲ့ ထိပ်မှာ၊ ဘေးမှာ၊ နံရံမှာ အို အရွယ်အစားတွေ စုံနေအောင် ကြွားသွားခဲ့လေရဲ့
လာပါပြီ Canon….. Canon Camera ကတော့ ကျွန်မရဲ့ အခိုက်ဆုံး ပစ္စည်းပေါ့.. ဒီဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း canaon digital camera နဲ့ပဲ ရိုက်ခဲ့တာလေ
ဒါကတော့ acer laptop တွေကိုတင်သွင်းတဲ့ Thein Minn Company ရဲ့ပြခန်းပါ
Laptop တွေရမယ်နော်.. Brand စုံတယ် ဈေးစုံတယ်..လာထား
ဒီလို ဒီလို ခမ်းခမ်း နားနား ခင်းကျင်းပြသတဲ့ မြန်မာ့ သတင်းအချက်အလက်နဲ့ နည်းပညာ ပြပွဲကြီးမှာ ပင့်ဂိုလ်းတို့ကတော့ ဘာတစ်ခုမှကို မ၀ယ်နိုင်ပဲ ငေးရုံသာ ငေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပါရှင်။
Filed under General Knowledge |	2 Comments
စိုးထက် - Soe Htet ! on March 26, 2008 at 12:13 pm said:
ဈေးတော်တော် သက်သာတာပဲ ပြန်ရောက်မှ ၀ယ်တော့မယ် ဒီမှာလည်း ချိုင်းနားတွေပဲ 😛
BLACK DREAM on March 27, 2008 at 10:41 am said:
လှူတဲ့သူ “ကိုစေးထူး” ကြီးကိုရော..ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်တော့် အစ်ကိုအစ်မတွေ အတွက်ရောက် တကယ်ကို ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်..။ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါခဲ့ရသလိုခံစားရပါတယ်..။ ကျွန်တော် ကတော့ပြန်လာမှပဲ ပူးပေါင်းတော့မယ် 🙂